BERNESE GOLDEN MOUNTAIN DOG FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA SY SARY - ALIKA
Alika mitambatra Golden Retriever / Bernese Mountain Dog mifangaro
Luca, tovolahy tanora Golden Mt. Alika, sary natolotry ny Baker's Bernese Blessings
Alika Mountain Mountain Bernese
Golden Mt. amboa
Ny alika Golden Mountain dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny Alika Mountain Bernese . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Alika tendrombohitra volamena
DBR = Registra fitaterana mpamorona = Alika tendrombohitra volamena
Designer Dogs Kennel Club = Alika tendrombohitra volamena
Mpanoratra International Canine Registry®= Alika tendrombohitra volamena
Lucy the Golden Mountain Dog (Golden Retriever / Berner mix) amin'ny faha-7 volana— 'Be fitiavana izy, sariaka ary tsara tarehy. Hendry be izy ary hatreto dia mora nampiofana. '
Lucy the Golden Mountain Dog (Golden Retriever / Berner mix) amin'ny 7 volana
Quincy ilay Golden Mountain Dog amin'ny taona 1— 'Noraisinay avy amin'ny mpiompy an-trano i Quincy. Ny reniny dia antsasaky ny Bernese ary ny antsasaky Retriever ary ny dadany dia Bernese madio (3/4 Bernese Mountain Dog 1/4 Golden Retriever), araka ny azonao an-tsaina, tsy mora i Quincy. Ny ankamaroan'ny iray tampo aminy dia nanana ny marika Bernese, raha Quincy sy ny iray tamin'ireo rahavaviny kosa dia mainty. Tsy nisy na dia volamena aza izy ireo, ka tsy haiko hoe maninona no nantsoin'ireo mpiompy hoe alika tendrombohitra volamena izy ireo haha. Amin'izao fotoana izao dia milanja 80 pounds i Quincy, ary afaka mametraka an-tsoroka ny tongony amin'ny soroka ary somary 5 '7' aho. Mahagaga sy lavorary ity alika ity, saingy tsy afaka milaza izany ho an'ny karazany aho satria, iray, fantatro fa manana olana amin'ny fitondran-tena ny rahalahiny, ary izy irery no karazana nandaniako fotoana miaraka amin'i. Saingy i Quincy dia nahazo ny tsara indrindra tamin'ny tontolo roa. Tena marani-tsaina izy, tena mahatoky ary dodona ny hampifaly azy, ka tsio-drivotra ny fampiofanana azy. Amin'izao fotoana izao, manofana azy amin'ny fikafika sy fahaizana izay fantatry ny alika mpanompo amin'ny tetik'asa iray aho, ary mianatra haingana dia haingana izy. Mahagaga ny toetran'i Quincy, milamina izy ary mandeha mora foana. Tao amin'ny alikanay iray hafa ihany no nitolokoany, Springer Spaniel izay lehibe kokoa noho izy ary avo lenta, raha tsy izany dia alika hafa fotsiny no tiany ary misy fipoahana ao amin'ny valan'alika. Ny fitiavana sy ny sakafo ihany no tadiavin'ity alika ity. '
Fampahalalana momba ny fiompiana alika naoty: A toetran'ny alika dia taratry ny fahaizan'ny tompony mahatakatra azy sy manome azy izay ilainy ara-nofo ho toy ny biby kaninina, fa tsy amin'ny karazany na fifangaroan'ny karazany ao amin'ny alika.
Quincy ilay alika Golden Mountain mainty tamin'ny taona 1. Manana tasy fotsy eo amin'ny tratrany izy.
Peter, alika kely Golden Mountain tamin'ny 4 volana, sary natolotry ny Baker's Bernese Blessings
'Coleman, izay nolazaina tamiko dia mbola tsy nahita olona na alika mbola tsy tiany! Masoivoho lehibe ho an'ny karazany sy mahafatifaty. ' Sary natolotry ny Baker's Bernese Blessings
'Red Sox, taranaka faharoa GMD. Malemy sy mamy tokoa izy — alika am-pofoana. Eto izy mijery ny ekipany baseball tiany indrindra! ' Sary natolotry ny Baker's Bernese Blessings
Alika kely Golden Mountain 18 andro, sary natolotry ny Baker's Bernese Blessings
Hijery ohatra misimisy momba ilay Golden Mountain Dog
Sarin'ny alika Golden Mountain
any Amerika Avaratra purebred lisitra Inc.
amerikana bulldog volontany sy fotsy
Malagasy Eskimo alika sisintany collie Mix
mixer spaniel sy corgi mix